Qananiisaa fi Xirunash: Shaakala keenya haala gaariin xumurreerra - BBC News Afaan Oromoo
Qananiisaa fi Xirunash: Shaakala keenya haala gaariin xumurreerra
Maaraatoonii Landan Dilbata Ebla 22, 2018 gaggeeffamuurratti atileetota Itoophiyaa Qananiisaa Baqqalaa fi Xirunash Dibaabaa dabalatee, atileetonni gameeyyii biroonis ni hirmaatu. BBCn Landanitti carraa atileetota kanneen haasofsiisuu argatee ture.
Gaaffii nan mo'adha jettee yaaddaa?' jedhuuf atileet Xirunash wayita deebistu, ''Waaqayyootu beeka. Shaakala haala gaariitti taasiseera, kanumaafan dhufe, yoo Waaqayyo jedhe nan moo'a jedheen yaada.'' jetteetti.
''Riikoordii cabsuun waan akka salphaatti dubbatamu miti, sa'aatiin 2:15 baay'ee ulfaata. Haalli qilleensaa fi kan si waliin fiigu gaarii ta'uu qaba. Bara darbe sa'aatii gaariin fiige, Meeriinis riikoordiitti dhiyaattee waan turteef ni cabsina jedheen yaada.''
Riikoordii Paawulaa Raadkiliif cabsuu
''Isheenis fooyyesitetti waan tureef eyyeen cabuu ni danda'a. Garuu akka salphaatti waan dubbatamu miti.''
Waa'ee morkattootaas gaafatamtee, ''Akkuma beekamu yeroo hedduu Itoophiyaafi Keeniyaa gidduuttidha morkiin cimaan kan taasifamu. Bara kanas atileetonni hedduu dhufaniiru'' jetti atileet Xiruunash Dibaabaa.
''Maaraatoonii nama injifatu himuun rakkisaadha, namni hin eegamneyyuu injifachuu waan danda'uuf, qorumsa guddaatu nu eeggata.''
Atileet Xurunash alatti, Maaree Dibaabaa, Tigist Tufaafi Tadelech Baqqalaa atileetota Keeniyaa Meerii Keetaani dabalatee kaan ni morkatu.
Dorgommii baranaa irratti kan hirmaatu atileet Qananiisaa Baqqalaa, qophii gaarii akka godhe BBCtti himeera. ''Shaakala koo haala gaariin xumureen jira. Dorgomtoota jiran waliinis, morkii cimaa godhuuf qophaa'een jira.''
Isa darbeerra lammaffaa bahuun kan xumure Qananiisaan, ''Maaraatoonii Landan bara darbe dorgommiif torban sadi wayita hafu dhukkubsadheen ture. Kanaafis torban tokkoof qophii koo addaan kuteen ture.'' jedha.Atiletiin lammii Keeniyaa Daani'eel Waanjruu, dorgommii bara darbeen tokkoffaa baheera. Baranas atileetii kanarraa fi Eliyuud Kipchoogee irraa morkii cimaan isa eeggata.
''Baranammoo dorgomtoonni haarofti itti daddabalamaniiru. Waanjiruu irra namoota biraatu morkii guddaa taasisan jedheen yaada.
Qananiisaan alatti, Guyyee Adoolaafi Tolaa Shuraan Eluwid Kipchoogee, Moo Faarah fi atileetonni kaan ni morkatu.
Goodayyaa suuraa Tigist Tufaa fi Guyyee Adoolaa
Atileet Guyyee Adolaan maaraatoonii isaa lammaffaa Landanitti fiiga. Maaraatoonii isaa jalqabaa Barliinitti fiiguun yeroo saffisaa galmeesseera. Qilleensi Landan bareeda kan jedhu Guyyeen Landanitti morkii cimaa gochuu yaada qaba.
''Shaakalli wanti gochaa turre bareedaadha. Kanaaf, qabxiillee fedha Waaqaa wajjiin waan tokko ni arga jedheen yaada.''
Maaraatooniin Landan baranaa qilleensisaa garmalee ho'aa tahuu akka danda'u, dhiheessaan haala qilleensaa BBC Saayiman King himeera.